स्वयम्सेवक - कोभिड १ V भ्याक्सिन लिनुहोस्
म COVID-19 खोप केन्द्रहरूमा एक भण्डारी स्वयंसेवक बन्नको लागि कसरी साइन अप गर्न सक्छु?
एक NHS स्वयंसेवक उत्तरदाता को रूपमा, तपाईले गर्नु पर्ने कुरा हो यो साइन-अप फारम पूरा गर्नुहोस्। तपाईंको गुडस्याम विवरणहरू प्रयोग गरेर लग-इन गरेपछि, तपाईंलाई फारममा पुनः निर्देशित गरिनेछ। आउने दिनहरू र हप्ताहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा विभिन्न समयमा विभिन्न सेवाहरू खडा हुनेछन्। यसको मतलव तपाईलाई केहि हप्ताको लागि साईटमा आवश्यक पर्दैन। कृपया कर्तव्यमा जारी राख्नुहोस् र अन्य कार्यहरू स्वीकार गर्नुहोस् जब तपाईं सचेतहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ।
के भण्डारीको भूमिका गैर क्लिनिकल समर्थन भूमिका भन्दा फरक छ?
होइन, तिनीहरू उही भूमिका हुन्। तपाइँ दुबै भण्डारी र गैर-क्लिनिकल समर्थनको लागि कार्यहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ
मैले भण्डारी भूमिकाको लागि आवेदन दिएको छु र यसले भनिरहेको छु म पहिलेदेखि नै एक भण्डारे स्वयंसेवक हुँ, तथापि, म मेरो भूमिका अन्तर्गत 'स्टीवर्ड सपोर्ट' देख्न सक्दिन?
एनएचएसले पुरानो 'गैर-क्लिनिकल समर्थन' भूमिकालाई संयुक्त भूमिकामा रूपान्तरण गरिरहेको छ जसमा भण्डारी समर्थन समावेश छ। तसर्थ, तपाईं अझै सुन्न र शब्द 'गैर-क्लिनिकल समर्थन' देख्न सक्नुहुन्छ, कृपया आश्वस्त हुनुहोस् यसको मतलब तपाई भण्डारी कार्यका लागि कार्यहरू प्राप्त गर्न तयार हुनुहुन्छ।